PARLEMANTA ROA TONTA : Hiatrika fivoriana manomboka anio handinihana lahadinika telo lehibe
Hanomboka anio alatsinainy faha-12 ny volana aogositra ny fivoriana tsy ara-potoana voalohany hatrehin’ireo parlemanta roa tonta. 12 août 2019
Fivoriana haharitra 12 andro handinihana lahadinika miisa telo lehibe. Ho an’ny Antenimieram-pirenena manokana dia voafaritra ny didim-panjakana laharana faha 2019-1415 tamin’ny 25 jolay 2019 no mampiantso azy ireo hiatrika fivoriana tsy ara-potoana voalohany izay handinihana lahadinika telo lehibe. Anisan’izany ny fandaniana ny fitsipika anatiny mifehy ny Antenimieram-pirenena, ny fandinihana tolo-dalàna mifehy ny antoko mpanohitra ary ny fampahafantaran’ny governemanta ny politika ankapoben’ny fanjakana.
Tahaka izay ihany koa ny eo anivon’ny Antenimieran-daholona dia ny didim-panjakana laharana faha 2019-1416 no mampiantso ny fivoriana manokana ho azy ireo. Fotoam-pivoriana hoentina handaniana ny lalàna mifehy ny antoko mpanohitra ary ihany koa ho fampahafantarana ny politika ankapoben’ny fanjakana. Samy ao anatin’ny 12 andro avokoa no hanatanterahana ireo fotoam-pivoriana. Hanomboka amin’ny 11 ora antoandro ny fanombohana ofisialy ho an’ireo solombavambahoaka raha amin’ny 4 ora folak’andro kosa ho an’ireo loholona.